Daangaa Oromiyaa irratti weerara baname ittisuu fi deebisuuf akka dirmatamu ABOn hubachiise. – Oromedia
Home » Uncategorized » Daangaa Oromiyaa irratti weerara baname ittisuu fi deebisuuf akka dirmatamu ABOn hubachiise.
(Oromedia, 22 Amajjii 2016)-WBO, Qeerroo fi Ummanni Oromoo Duula Haaraa Oromiyaa irratti baname ittisuu fi deebisuu keessatti akka qooda isaanii bahan ABOn hubachiise.
ABOn ibsa mata duree, “Ummatoota wal dura Dhaabuun Umrii Mootummaa Wayyaanee Caalatti Gabaabsaa,” jalatti Amajjii 21 bara 2017 baaseen akka ibsetti, Wayyaaneen umurii bittaa dheereffachuuf ummata Oromoo olloota waliin walitti buusaa yoona gahe.
Haala kana hubachuun, ummati Oromoo nagaa fi bilisummaa deebifachuuf furmaati qabu, mootummaa Wayyaanee of irraa buusuu qofa.
“Kanaafis ummatni Oromoo FXG itti jiru finiinsuu qofatu furmaata hawwuu fi barbaadu argamsiisaaf,” kan jedhe ABOn, “waan taheef har’as ABOn ummatni Oromoo bakkayyuutti fincila isaa itti fufuun mootummaa Wayyaaneetti xumura akka itti tolchu waamicha isaa haaromsa,”jedhee jira.
WBO bakka jiru hundatti diina ummata Oromoo irratti roorrisaa jiru haleeluun dirqama isaa akka bahatu ABOn dhaamee jira.
Qeerroon Oromoos mootummaa Wayyaanee/TPLF dhabama irraa of hambisuuf wixxifataa jiru kana irratti fincila guutuu Oromiyaa qindeessuun umrii isaa gabaabsuu keessatti qooda isaa akka bahatu ABOn qajeelcha dabarsee jira.
Ummatni Oromoo biyya ambaa jiraatus haalli ummatni keenya keessatti argamu ulfaataa tahuu hubatuun, yeroo fi qabeenya isaa dhimma dantaa Oromoo kabajsiisuu danda’u irra oolchuun madda furmaataa akka tahu ABOn yaadachiiseera.
Guutummaa Ibsa ABO:Ibsa-ABO-LiyyuuPolice-Jan-21-2017
Previous: Artiist Haayiluu Disaasaa Waggaa 62tti boqate (1955-2017)
Next: Sirni Kabaja Ayyaana WBO bara 2017 ummataaf Gadhiifame.